Iraisam-pirenena Mampiaraka toerana
Eto aho no nihaona tamin’ny antsasany. Izaho misaotra anao misaotra anao noho ny fahafinaretana lehibe. Efa nihaona tamin’ny olona efa naniry ny fiainako rehetra, ary milaza izy fa mahatsapa izany ihany koa. Dia mahatsapa toy ny efa fantatra samy hafa nandritra ny fotoana ela, ary isan’andro eo amin’ny fiainantsika ankehitriny dia feno hafaliana. Amim-pahatsorana, i Nadia ry Zalahy, misaotra betsaka anao noho ny zavatra anananao, ary iza no manao ny asa lehibe amin’ny fanampiana ny olona mahita ny tenany eo goavana ity izao tontolo izao.
Ny zavatra hafa rehetra eo an-tanako Nadia (Brezila) Raha nisy olona niteny ahy mialoha fa izany no marina mba hahita ny fitiavana ao amin’ny Internet, ary izaho ihany no tsy maintsy nihomehy. Fa ankehitriny dia fantatro fa hitranga ny fahagagana, satria nampiasa ny tranonkala mba hahitana ny lehilahy iray, ry Simona. Nihaona tamin’ny olona, ary nahatsapa fa efa fantatra ny tsirairay rehetra eo amin’ny fiainantsika. Fotsiny isika, mila mahita ny tsirairay ny namany, ary dia nataony izany. Amin’izao fotoana izao, dia na voafafa ny mombamomba ho mariky ny fanajana ny tsirairay. Misaotra anao mampiseho antsika ny lalana. Maniry aho ny hafa rehetra lehilahy sy vehivavy, mahita ny fitiavany eto. Amim-Pahatsorana, Daria.
Izaho dia te Haneho ny fankasitrahako manokana ireo rehetra izay namorona ity mahafinaritra toerana. Matoky aho fa ny fitiavana, ary ankehitriny, ry vadiko, dia hiaraka amiko any amin’izay efa nolazaiko. Nihaona izahay eto ary nanomboka niresaka. Efa ampiasaina isan-karazany ankehitriny fitaovam-pifandraisana. Ary farany, taorian’ny taona maro ny finamanana ary fivoriana, nivady izahay tamin’ny novambra, ary tena faly aho. Sarotra ho ahy ny mahatakatra sy mino fa ny iraisam-pirenena online Dating tena miasa. Fa ireo rehetra izay mitady ny fitiavana, te-fahazoan-dalana hiditra fa ny sonia tsy nisy fisalasalana.
Efa nanoro hevitra rehetra namako
← Meksikana ho an'ny vehivavy ny fanambadiana - Pitiavana Tours - Hitsena ny Vehivavy ny Fanambadiana
Satria Belarosia dia manambady Breziliana →